mardi, 23 mai 2017 21:09
Cinéma: James Bond décédé
L'acteur principal James Bond 007, Roger Moore, vient de décéder à l'âge de 89 ans à la suite d'un cancer.
mardi, 23 mai 2017 20:08
Sambava: Ambulance nitondra marary mafy, lany solika teny an-dalana
Androany tokony tamin'ny iray ora sy sasany tolakandro no niseho ity tranga ity, raha avy namonjy ramatoa iray tratry ny lozam-pifamoivoizana tao Ambarimiambana, ka avy natao radio tao amin'ny SALFA Loterana, ary hoentina hamonjy ny Hopitalibe CHRR Besopaka no lany solika.
Lasa nividy solika 5 lititra teny amin'ny Tobin-tsolika ny havan'ny marary kanjo tsy nety velona intsony ilay Ambulance, nampiana ny solika fa ny teo ihany no teo.
Nitaintaina mafy ny fianakaviana nandritra izany ka voatery nanafatra 4X4 hafa, ora iray taty aoriana namindrana ny marary.
Niteraka fahasorenana teo amin'ny fianakavian'ny marary ity tranga ity.
Vaovao ny mpamilin'ity Ambulance ity taorian'ny raharaha nahatratrarana lavanila tao anaty ambulance iny ka asa na mbola tsy mahafehy tsara ilay fiara na olana teknika.
mardi, 23 mai 2017 17:46
Ikalamavony : Tsy milamina ny tanàna
Omby 200 isa indray no norobain'ny dahalo mirongo basy mahery vaika tao amin’ny tananan'Anjiva, atsimon'Ikalamavony, Fokontany Mananantanana, Kaominina Ikalamavony ny faran’ny herinandro teo. Nianatsimo miazo ny Distrikan’Ambalavao ny dian'ireo omby.
mardi, 23 mai 2017 17:41
Tsingin'i Bemaraha : Rahonan’ireo Ben'ny Tanàna HVM hakatona
Nanao hetsika fitakiana ny hanomezana ny anjara volan'ireo Kaominina manodidina ny valan-javaboahary Tsingin'i Bemaraha azo avy amin’ny fizahantany, tamin’ny alahady lasa teo, ireo Ben'ny Tanàna avy ao Bekopaka sy Antsalova, izay marihina fa samy HVM.
Nikabary namory vahoaka tao Bekopaka izy ireo sady nampilanja sorabaventy sy mampitandrina fa hakatona ny fampitsidihana ny Parka raha tsy omena io vola io.
Marihina fa efa tamin’ny 2009 no tapaka io famatsiam-bola avy amin’ny anjara volan'ny saram-pidirana ao amin’ny Faritra Arovana io, rehefa nandalo fotoan-tsarotra ny Madagascar National Parks tamin’ny fitantanana noho ny grevy izay nampihemotra ireo mpizahatany nandeha taty Madagasikara.
mardi, 23 mai 2017 17:36
Sainte-Marie : Vazaha iray no nahatratrarana zaza telo, tsy ampy taona, tao an-tranony
Ny alahady teo no nitrangan’ity raharaha ity. Ny roa amin'ireo dia zaza efa zatra mpandeha ao an-tranony. Tafaporitsika ilay zaza fahatelo, izay tsy mpankao aminy, ka io no nanaitra ny manodidina ary ireto farany no nampandre ny manampahefana.
Miandry izay ho vokatry ny fanadihadiana ny mponin'i Sainte Marie ho tambin’ny tsy fanaovan'izy ireo fitsaram-bahoaka. Etsy ankilany, mandrahona ny havan'ireo zaza ireo fa tsy hanaiky mora izy ireo raha votsotra eo io vazaha io.
Fianarantsoa: Hetsika fy ara-tsakafo
Miditra amin'ny andiany faha-efatra izao ny Salon du Bon et du Goût eto Matsiatra Ambony. Izany dia vanim-potoana natao hanomezana lanja ny fihariana sy fandraharàna manodidina ny hay nahandro sy ny fampisakafoanam-bahiny eto amin'ny faritra.
40 no tranoeva mandray anjara amin'ny varotra fampirantiana. Maro ireo hetsika sy fanentanana ary fifaninana entina manasongadina ireo vokatra misy eto an-toerana. Isan'izany ny fanodinana ronono sy ny famokarana fromazy.
Sambava : Tovolahy 25 taona hita faty tao anaty renirano
Mpitondra lakana mampitohy an’i Sambava sy Lavatsiraka no nanjavona hatry ny omaly 22 may 2017 nefa ny lakany tazana natopan’ny rano. Efa vatana mangatsiaka no hita androany ary nampiakarina avy tao anaty rano.
Manana aretina mitaiza ilay tovolahy, raha ny fanazavan’ny rahalahiny ary misy fotoana torana tsy mahatsiaro tena izy. Efa notsaboina ary efa fotoana ela no tsy nihetsika aretina ka mahagaga ny havany izao tranga izao indray.
« IVONDRO 2017 » : un exercice franco-malagasy de coopération opérationnelle multilatérale
Dans le cadre de la coopération régionale dans l’océan Indien, les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) et les forces armées de Madagascar organisent un exercice majeur baptisé « IVONDRO 2017 », du 26 au 30 mai 2017.
Près de 900 militaires appartenant à l’ensemble des pays de la COI (commission de l’océan Indien) – Madagascar, France, Seychelles, Maurice et Comores - seront déployés à Madagascar.
mardi, 23 mai 2017 07:54
Donia 2017 : Rendez-vous à Nosy-Be du 31 mai au 4 juin
La 24ème édition du festival international Donia se déroule dans l'île aux parfums, du 31 mai au 4 juin 2017.
Par coïncidence, elle tombe cette année en pleine période du ramadan.
mardi, 23 mai 2017 07:50
Donia Nosy Be 2017 : Aicha et Bouchirane Pop's sont sacrés Miss et Mister
Le concours s’est déroulé au gymnase couvert Toly Laurent samedi soir. La soirée a été animée par Jazz MMC, Hachimia et des jeunes talents nosybéens.